Beelink GT-King ongorora yeiyo mutsva mutserendende (Amlogic S922X) | TeraNews.net
Munyori Ekaterina Yakabudiswa pa 01.06.2019
Verenga wenyaya pakupera kwechinyorwa.
Chekupedzisira, vapepeti vedu vakagamuchira iyo Beelink GT-King Tichaedza kukuudza zvakadzama nezve iyo nyowani set-yepamusoro bhokisi, kugona kwayo, zvakanakira nekuipira, uye zvakare edza kutsvaga kana zvakakodzera kutenga.
Ngatitangei nehunyanzvi hwekugadziriswa.
Prev 1 kubva 3 Tevere
CPU CPU S922X Quad pakati ARM Cortex-A73 uye mbiri mbiri ARM Cortex-A53
Inoratidza Inotsigirwa x HDMI, 1 x CVBS
Audio Yakavakwa-mukati DAC x1 L / R, x1 MIC
MAKARALI USB MAKARALI USB 4.1
inowanikwa DC Jack x1 12V 1.5A
x1 USB2.0 Port, x2 USB3.0 Machiteshi
x1 TF kadhi kiti
x1 Batsira Bhatani
Power supply Kupinda Adapter: 100-240V ~ 50 / 60Hz, Kubuda: 12V 1.5A, 18W
Yakatsigira Hardware decoding mafomu uye kugadzirisa
Tsigira akawanda-vhidhiyo decoder kusvika ku4Kx2K @ 60fps + 1x1080P @ 60fps
Inotsigira akawanda "akachengetedzwa" vhidhiyo kududzira zvikamu uye panguva imwe chete decoding uye encoding
H.265 / HEVC Main / Main10 profil @ level 5.1 High-tier; kusvika ku4Kx2K @ 60fps
VP9 Profile-2 kusvika 4Kx2K @ 60fps
H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 kusvika 4Kx2K @ 60fps
AVS2-P2 Profile kusvika ku4Kx2K @ 60fps
H.264 AVC HP @ L5.1 kusvika 4Kx2K @ 30fps
H.264 MVC kusvika ku1080P @ 60fps
MPEG-4 ASP @ L5 kusvika 1080P @ 60fps (ISO-14496)
WMV / VC-1 SP / MP / AP kusvika ku1080P @ 60fps
AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun Mbiri kusvika 1080P @ 60fps
MPEG-2 MP / HL kusvika 1080P @ 60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP / HL kusvika 1080P @ 60fps (ISO-11172)
RealVideo 8 / 9 / 10 kusvika 1080P @ 60fps
Beelink GT-King yaive yakarongedzwa zvakapusa, kititi yese yakarara mubhokisi rimwe, zvisingaite, semuenzaniso, iyo Beelink GT1 Mini uye iyo yakatangira Beelink GT1 Ultimate, mukurongedzwa kwaiiswa zvinhu zvese mumabhokisi akapatsanurwa. Iyo yekudzivirira iri kure inorongedzwa muhomwe yepurasitiki, iyo HDMI tambo inokamurwa neyemukati keteni tayi, sekudaro waya kubva kumagetsi.
Pachuku yacho inosanganisira:
Remote control (USB adapta yakavanzika mukati meiri kure)
Murayiridzo mupfupi (unosanganisira Russian)
Tsigira Kubata Tiketi
Zvakasiyana nezvekudzora kure. Iyo yekudzivirira kure inoshanda pane 2x AAA mabhatiri (asina kuisirwa), inobatana neiyo console kuburikidza isina waya isina USB adapta. All mabhatani pane iri kure control kunze kwe simba bhatani rinoshanda chete kana USB adapta yakabatana. Bhatani remagetsi rinoshanda kuburikidza neye IR yekugamuchira.
Prev 1 kubva 2 Tevere
Iyo kure kune yakavakirwa-gyroscope uye bhatani rekutsvaga kwezwi. Iyo bhatani yezwi rekutsvaga kunze kwebhokisi inogona chete kuvhura Google Assistant izwi mubatsiri. Nezve kutsvaga kwezwi mune zvinoshandiswa zvakaiswa pane koni, pasina mamwe maritidziro atiri kutaura. Asi mushure mekushandisa yakawedzera 10 maminetsi enguva, zvese zvinogona kugadzirirwa
All mabhatani pane ari kure control anoshanda nemazvo, iro bhatani remagetsi rinogona kugadzirisirwa akasiyana modes, shutdown, kurara maitiro, kuvhundutsa
Prev 1 kubva 7 Tevere
Beelink GT-King yakagamuchira humwe hunyanzvi hwokugadzira, kutanga hwakava hwakakura, chikonzero chingave chekuwedzera kwekukura kwemakesi pamberi pe processor yepamusoro, uye kushaikwa kwekutonhora kunoshanda. Kechipiri, kwakanyorwa kwe dehenya nemaziso anovhenekera kwakaonekwa pane nyaya, mune iyo mamiriro maziso anopenya girini, iko kuseri kwekushongedza chaiko.
Padivi repamberi pane iro gomba reyakagadzirirwa-maikorofoni yekutsvaga izwi. Kumucheto kuruboshwe kune 2 ye 3.0 USB port uye memori kadhi slot. Padanho rekutevera pane magetsi anobatanidza, HDMI 2.1 port, USB 2.0 port, SPDIF port, AV port
Iko hakuna zvibatanidza pane iyo kumucheto kurudyi
Pazasi peBelink GT-King, pane mucherechedzo (nhamba ye serial) uye gomba rekuti ishandise maitiro ekugadzirisa.
Kutanga uye chimiro
Paunotarisa Beelink GT-King kekutanga, senge pane vese vanogadzirira, iyo yekutanga yekugadzika wizard inotanga, inosarudza mutauro, nguva yenguva, nezvimwe.
Kunyangwe iyo yakagadziridzwa yeApple 9, iyo console's interface haina kuchinja, iyo inotanga uye skrini yemusha inotaridzika zvakafanana
Prev 1 kubva 11 Tevere
Prefix Zvirongwa Beelink GT-King
Izvo zvinotevera zvigadziro zvinowanikwa mune firmware shanduro iyo yakaiswa pane yedu console:
kuratidza - zvidzitiro
Screen resolution - Screen kugadzirisa mamiriro
Auto switch kune yakanakisa gadziriso - otomatiki switch kune yakanakisa screen resolution
Display Mode (kubva pa480p 60 hz kusvika 4k 2k 60hz) - danho rekusarudzwa kwesarudzo resolution.
Ruvara Kudzika Zvirongwa - ruvara kudzika marongero
Colour Space Space Zvirongwa - zvemavara nzvimbo marongero
Screen chinzvimbo - Screen zoom kurongedza
HDR kusvika kuSDR - otomatiki shanduko yemifananidzo yeRDR kune SDR (yakakurudzirwa painobatana neTV isina HDR tsigiro)
SDR kuna HDR - otomatiki shanduko yemifananidzo yeSDR kuHDRR (yakakurudzirwa kana ichibatana neTV nerutsigiro rweHRR)
HDMI CEC - marongero ekudzora akagadzika-pamusoro bhokisi kuburikidza neTV kure control (kure nevese maTV anoitsigira, zvine tsigiro mune maTV emakore achangopfuura ane SMART mabasa, asi neaya maTV anotsigira chiyero ichi anoshanda zvakanaka.)
Audio goho - ruzha rwokuburitsa zvingasarudzwa, unogona kusarudza pakati pezvinobuda kuburikidza neHDMI uye SPDIF
Powerkey tsananguro -kuisa chiito pane / pa bhatani bhatani pane chinji kure, unogona kuisa zvinotevera zviitwa: kusimira, pinda muhope mode, tangazve.
More kurongwa - inovhura rondedzero izere yemashandisirwo emidziyo
Kutsvaga Izwi paBelink GT-King
Iyo console ine izwi rekutsvaga, asi zvinosuruvarisa kutsvaga hakushande mukati mezvishandiso zvakaiswa pane Beelink GT-King. Paunotarisa maikorofoni pane yekudzora kure, Google Voice Assistant inotanga. Kuti ugadzire kutsvaga kwekutsvaga mukati mekisheni yakaiswa, iwe unofanirwa kushandisa nguva nekuchinja magadzirirwo emukati ekoni.
Pachivanhu, tinotanga nebhenji muAntutu, chinamato cheBelink GT-King chakahwina mapoinzi anopfuura zana nemakumi mashanu ezviuru
Inotevera Geekbench 4 bvunzo
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hapana kana imwechete TV TV Bhokisi ine zviratidzo zvakadaro, ichi ndicho chaicho chiratidzo chitsva chezvinhu zviri kunyaradza admin.
Kupisa uye kukwiza
Mune mamiriro ekunetseka-mutoro, tembiricha yaichengetwa pamazinga e73 madhigirii, achitenderera panguva yekuremerwa kwenguva refu yaive 13%
Isu tinoda kuziva kuti kana iwe ukaisa yekutanga tembiricha yekudziya masisitimu nenzira yekumira ne fan kana hombe 120 mm inotonhorera, trotting ichinyangarika zvachose, uye tembiricha inoramba iri pamwero we69-71 degrees
Izvo zvakakoshawo kuziva kuti kana uchishandisa koni yechinangwa chayo, kutarisa vhidhiyo, hapana kutaura nezve chero kutengesa, nekuti CPU mutoro hausvike huwandu hwakakomba kune ese cores panguva imwe chete. Kana dziri mitambo, iko kuroveresa kuripo, kunyangwe isiri ipapo, asi mumutambo wemitambo hazvizivike, nekuti iyo processor pachayo ine simba rakaringana, uye kunyange kudzikisira mashandiro ekushandiswa kwemacores hakukanganisa kuita kwakazara kwekoni.
Kana iri iyo yakabatana ye wired, hapana matambudziko, iyo yakaziviswa kumhanya mu1 Gbit ichokwadi.
Asi kubatana kweWi-Fi kune zvimwe zvausingakwanisi, pa2,4 Ghz kumhanya kunoyerera kuchinjisa 70-100 Mbit, pa5 GHz, kumhanya kunochengetwa ku300 Mbit.
Chaizvoizvo kukosha kwechino mudziyo kutamba kwevhidhiyo kubva kune chero zvinyorwa. Pakuedza vhidhiyo, Kidi neMX Player yakashandiswa. Seyekuchengetedza vhidhiyo yakashandisa NAS Synology DS718 +. Mavhidhiyo acho aisanganisira akati wandei mavhidhiyo emhando dzakasiyana (4k, 1080p) uye hukuru hwakasiyana kubva ku10Gb kuenda ku100Gb.
Kutamba kwevhidhiyo yemunharaunda, nekuda kweiyo yepamusoro-end Amlogic S922X processor, inoshanda zvakakwana, hapana zvachose kurodha pasi, hapana kuderera, mafomu ese evhidhiyo anotamba mushe, achidzosera pakarepo.
Paunenge uchiona vhidhiyo nekairesi yetiweki yakabatana, pamwe nekutamba munharaunda, hapana matambudziko akaoneswa.
Asi panguva yekuyedza vhidhiyo pamusoro peWi-Fi, pakanga paine makomendi. Kana zvakabatana pakudzokororwa kwe2.4 GHz, mafaera chete kusvika ku30 Gb muhukuru aiwanzo kutamba, uye kudzosera kumashure kune kunonoka kwakanyanya. Paunoyedza paRNUMX Ghz frequency, hapana matambudziko neyekutsvedza kwevhidhiyo akacherechedzwa, kunyangwe nguva yekudzosera kunonoka kwaive kureba uchienzaniswa neiyo waya yekubatanidza.
Kunyange zvakadaro, kuti uwane kunyaradza kwakazara, shandisa wiring uhusiano sewakanyanya kukurumidza.
Chinhu chakakosha, kunyangwe nenyaya yekuti Mugadziri akanyora pane iyo forum kuti iyi yakagadziriswa-yepamusoro bhokisi haina tsigiro yeDolbyTrueHD, DTS, Dolby Atmos codecs, isu tichiri kuita ongororo yekupfuura muedzo mune aya makodhi. Kuedzwa kwakaitwa paNAD M17 receiver, iro bhokisi-repamusoro bhokisi rakabatanidzwa nekaviri HDMI uye SPDIF. Nehurombo, hapana chaicho kutsigirwa, asi aya ma codec akaiswa mumushini pachawo, zvinoita kuti mamiriro acho agadziriswe mune inotevera firmware, isu tichava yakazara uye takamirira. Kana isu tine nhau pachinhu ichi, isu tinosimbisa wongororo iyi, pamwe nekushambadza mhinduro dzebvunzo.
Chirairo ichi chinogona kudaidzwa kunzi mutambo, pane kombi ndinoshanda chaizvo kunyangwe "inorema" mitambo. Iyi inotevera mitambo yakatangwa pabvunzo:
World pamusoro Motokari dzehondo Blitz
Sezvingatarisirwa, hapana matambudziko akacherechedzwa mumitambo, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka pasina mafirikwiti, sekungoti hapana trotting yakaonekwa panguva yemutambo, zvinokwanisika nekushandiswa kwenguva refu kwemutambo mutambo weiyo trotting ichave inoonekwa zvakanyanya, asi kana uchiedza iyo console kwemaawa 1 zvakasiyana Mumitambo, prefix inodziya chete kusvika ku65 degrees.
Iyi ndiyo yekutanga koni yakapinda mumusika neiyo yepamusoro yepamusoro-yekupedzisira Amlogic S922X processor uye zvirokwazvo ine zvikanganiso. Ehe, Beelink inoburitsa firmware yekuvandudza munguva pfupi iri kutevera iyo ichawedzera basa rayo uye kugadzirisa zvikanganiso, asi ikozvino, tinogona kupfupisa mutsva mutsva
Iyo inokurumidza processor kusvika ikozvino
Tsigiro yemafomu ese evhidhiyo uye macodecs aripo
Iko kugona kushandisa iyo console semutambo wetionsox
Iko kugona kugadzirisa iyo console iwe pachako nekushandura launcher uye kuisa zvimwe zvirongwa kubva kuGoogle Play
Kuvapo kwe2x USB ports 3.0
5 Ghz frequency inotsigirwa nemhepo
Mutengo Mharidzo yemharidzo yedu yakaenda kumutengo we $ 119, mutengo uripo wekoni panguva yekunyora wongororo $ 109.99, pamwe mushure mechinguva mutengo uchadonha zvakare. Asi mumaonero edu kitengo chemutengo chakanyanya, mutengo wechiyero chakadai unofanirwa kunge uri pedyo ne $ 100.
Kupisa uye kubata. Kunyangwe kupisa nekurongedza kwaicherechedzwa chete mukushushikana bvunzo, ivo vese vakafanana uye kana iyo application kurodha processor cores yose yakatangwa pane console, ipapo trotting inogona kudzokororwa
Slow Wi-Fi kubatana. Tichifunga nezve chokwadi chekuti vagadziri ve router vanozivisa huwandu hwekushandura data pamusoro peiyo waya isina waya paavhareji kubva ku500 Mbit / s kune 1,2 Gbit / s, zvawanikwa zvakawanikwa panguva yekuedzwa kwebhokisi-rakasarudzika zvinogona kutorwa seisina kugutsikana, kunyangwe uchifunga nezvekuti izvi hazvikanganise kuona kwevhidhiyo. nemitambo.
Kushaikwa kwekutsigira kweDolbyTrueHD, DTS, Dolby Atmos (ngetarisiro kuti izvi zvichagadziriswa munguva pfupi)
Kazhinji, isu tainyatsoda prefix, panguva iripo chaizvo mutsva, asi kwenguva yakareba sei ichataura. Tinogona kurudzira iyi yekutanga, kunze kwekuti haina vakwikwidzi.
Muchikamu chino isu tichaburitsa zvimwe zvekushandisa uye mhedzisiro yekuwedzera kweBelink GT-King
Mushure mevhiki yekushanda kweye set-yepamusoro bhokisi, iyo yakavakwa-in control function kuburikidza neiyo HDMI tambo, inonzi HDMI CEC, yakamira kushanda, chikonzero chakaziviswa panguva yekutongwa. Zvinoitika kuti iyo yakasungwa HDMI tambo haina HDMI CEC rutsigiro zvachose, uye chokwadi chekuti iyo console yakatanga kudzorwa kuburikidza nehunyanzvi hwekuita ichi chishamiso. Kuti iyi tekinoroji ishande, iwe uchafanirwa kutenga yakaparadzana HDMI tambo isina kuderera pane iyo 1,4 vhezheni, kunyange isu tichikurudzira iyo 2.0 shanduro
Pakupedzisira, 17.06.19 yakaita kuti yekutanga iwanikwe yeBelink GT-King, 20190614-1907. Mune ino shanduro, mugadziri akahanyisa hurongwa uye akagadziriswa mimwe mikwende. Isu pari zvino tiri kuyedza, tichashuma pamusoro pemhedzisiro zvakasiyana.
Iwo akanakisa smart wachi dze2022 maererano w4bsitXNUMX-dns.com
Fitness wachi Mobvoi TicWatch GTW eSIM
Zvine musoro kutenga Xiaomi Mi Band 7
5G kesi yeHUAWEI P50 Pro
Mhemberero yeDAC Aune X8 XVIII
Garmin Forerunner 255 uye Forerunner 955 - shanda pazvipembenene
HUAWEI PixLab X1 ndiyo mhando yekutanga MFP
Huawei MatePad Pepa: 3 mubhuku 1, diary uye piritsi
Gigabyte Aorus 17X YE Gaming Laptop Zvinotsanangurwa
Lenovo Yoga 7000 ipurojekita ye8K
Social Media Kupindwa muropa